I-Xiaomi enokusongeleka i-smartphone evulekileyo kwividiyo | I-Androidsis
Ukusonga kwe-Xiaomi yokuvuza kwevidiyo kwividiyo
Kwaphela iinyanga kwaqinisekiswa ukuba iXiaomi iyasebenza kuyo eyakho ifowuni yokusonga. Uphawu lwaseTshayina ke ngoko lujoyina oku Uluhlu olukhulayo lweempawu kwi-Android. Kancinci kancinci besifumana iinkcukacha malunga nale fowuni evela kumenzi. Ukusukela kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iye yavuza ividiyo apho unokuzibona khona okokuqala.
Kwezi veki sinedatha encinci malunga noku. Kodwa ngoku Le fowuni intsha yokusonga evela kwiXiaomi ihluzwe kwividiyo. Enkosi kuyo, sinokufumana umbono wento esinokuyilindela kwesi sixhobo. Enye yeefowuni ezinokusongwa sinethemba lalo nyaka mnye.
Isivumela ukuba sibone uyilo, apho kuyamangalisa ukuba zilunge kangakanani izakhelo. Kuba oku kuvumela ukuthatha ithuba elingaphambili kwisixhobo, ukongeza kumphezulu wokusetyenziswa okufanayo. Nangona singazi ukuba yeyiphi na imodeli yeXiaomi eya kuba nayo. Kwakhona siyayibona indlela esonga ngayo.
Akuthandabuzeki luyilo oluvelisa umdla kubathengi. Kuba inegalelo kwinto eyahlukileyo kwinto esiyibonileyo kwiimodeli zokuqala kwintengiso. Nangona ikwadala ukuthandabuza. Ukusukela ukuba inkqubo isetyenziselwa ukusonga, inika imvakalelo yokunganyangeki. Ke inokuba nokusebenza kakubi.
Kodwa le yinto esingenakukwazi nangoku. Ngethamsanqa, le fowuni ye-Xiaomi esongelayo kufuneka ifike kulo nyaka. Ukongeza, le vidiyo sele isishiya sinemvakalelo yokuba isixhobo sele sigqityiwe. Ke kuya kufuneka sinedatha engaphezulu kusungulo lwentengiso kungekudala.
Okwangoku asazi nto malunga nemihla ephathwa nguXiaomi. Akukho datha kwixabiso ukuba le modeli iya kuba nayo. Umbuzo ophambili ngowokuba ngaba uya kuba nexabiso eliphantsi kuneemodeli zeSamsung okanye zeHuawei. Ukuba kunjalo, unokufumana indawo yentengiso ye-Android. Sinethemba lokuva kuwe kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ukusonga kwe-Xiaomi yokuvuza kwevidiyo kwividiyo
I-Vivo S1: Ifowuni entsha yaphakathi kwebanga yefowuni